Isinkwa kuhhavini, Multivarki, izilimi ukudla nezinye zikagesi zasendlini kakhulu lula umsebenzi hostesses bese ugcine isikhathi ichithwa ukupheka. Yiqiniso, kuhle: download umkhiqizo, cindezela inkinobho, setha uhlelo - futhi benza abakuthandayo, imoto uzokwenza konke ngawe. Into esemqoka - ukuba uthole izindlela ezinhle, nokuthi yonke imishini esebenza ngaphandle kwezihibe, ngaphandle kwezihibe.
Amathiphu okusebenzisa lisebenze
Amakhekhe iresiphi for the umenzi isinkwa kungahle ncwajana zokupheka, izincomo, ngokuvamile iza kit emotweni kanye bhukwana imfundo. Kulokhu, udinga ngokuqinile landela lezi zincomo, kuyilapho umkhiqizo okukhipha kuyokuhambela kahle propechonnym uvukile kahle, hhayi olwaluhangukile, okumnandi. Ngokuvamile, uma silungiselela ku umenzi isinkwa, landela imiyalelo kubalulekile. Lokhu kusebenza futhi oda ukuqalisa imikhiqizo, kanti amanani alo, ukukhetha izinhlelo, isikhathi okuqoshiwe, njll Ngoba uma yithina imikhiqizo kuhhavini abavamile abakwazi zuza nxenye of babe inqubo, ukulungisa ezingeni lokushisa nokunye ke ephekwe umshini isinkwa - inqubo ngemishini ngokuphelele. Futhi uma 'isigamu-indlela "wena ke kuvaliwe, uhlelo waqala futhi kusuka ekuqaleni kaningi. Yiqiniso, kukhona umsebenzi "dopekanie", isibonelo, noma okunye okunjalo - ngemodeli ngayinye awayo izici. Kodwa uma, ngemva kokuxova inhlama aliphumi, kuyoba uketshezi - usiyise indinganiso kudingekile emotweni awukwazi. Bese ethula futhi domeshivat izandla - futhi umphumela akayena ngempela ezifanele. Ngakho niqaphele ukuba niyigcine isinkwa sakho Umenzi umsizi okuthembekile akazange iphenduke "povaronka" esigwegwile njalo.
Amakhekhe, ikhekhe, ikhekhe!
Manje ikhekhe iresiphi for umshini isinkwa. Sizoxoxa ambalwa. Eyokuqala - elula kakhulu, kodwa ikhekhe kuvela esihlwabusayo kakhulu futhi ithenda, njengomuntu ikhekhe encane. Ngakho, ifomu lapho izithako ezibekwe, kufanele ngesandla esivulekile ezinamafutha akahle. Lena umthetho yensimbi, ukuthi kufanele ivele kunoma yiziphi inqubo yakho baking. Amafutha ngeke sivumele inhlama unamathele ezindongeni isikhunta. Khona-ke, ngendlela okuhambelana kahle umshini wakho, download umkhiqizo. Lokhu ikhekhe recipe for umshini isinkwa azodinga inkomishi eyodwa kwezine zawo ubisi wafingqa, amaqanda 2 (inkukhu!), 3 wezipuni ibhotela, wathambisa (exubile abandayo nezinye izingxenye isikhathi eside). Amafutha Ungashintshanisa imajarini wokubhaka. Noma kunjalo, konke nge ukudla alube tastier. Ngaphezu kwalokho - 2 izinkomishi ufulawa, noma lokuqala, amamaki aphakeme kakhulu. Ngithanda ukukukhumbuza ukuthi umshini ngalinye isethi uya beaker. Kuyinto kubo futhi kufanele ulinganise imikhiqizo futhi ulayishe ifomu. Beka ushukela - 2 wezipuni (wezipuni). Kungaba ushukela oluyimpuphu. Paul isipuni sikasawoti, ingxenye yesine ka imvubelo briketika ezomile. inothi Side: kanye ikhekhe yethu iresiphi for umshini isinkwa, futhi iyiphi enye baking kudinga imvubelo fresh kuphela. On the imvubelo inhlama ubudala ayikwazi ukuphakama, lesi kulindeleke hlebchika baking uthola. Ngakho, thina ukulayisha zonke izingxenye, ukhethe uhlelo olufanele. Lokhu ikhekhe kubhakwa imizuzu 35, uma izinga lokushisa 350 degrees. Isisindo ke - cishe isigamu ikhilo. Lapho umkhiqizo usulungile, lisebenze kufanele ucishiwe, akha ikhekhe isuswe, ngokugcina ithawula nge. Izikhathi eziningana, anikine ngobumnene ukususa (angamthintitha) ku ithawula, ikhava, futhi ake khekhe uye selehlile kancane. Ngesicelo koqweqwe engenhla, ufafaze ushukela oluyimpuphu.
Ikhekhe nge lalamula elikhuhluziwe
Omunye iresiphi elula for ikhekhe - ne elikhuhluziwe lemon. Ukunambitheka ezifana nice, amnandi futhi isithandwa, nje Yum! Isisindo cishe 750 g. Uhlobo lomsebenzi - kuhlangene, umshini futhi mathupha. Ngakho, in a blender, beat amaqanda 3 200 ushukela ingcosana kasawoti. Kufanele uthole obukhulu, igwebu ezinhle. Sabalalisa ku-fomu. Kukhona futhi sibeka bhotela elicibilikile - 70-75 g Thatha lemon, deda on a grater, ngawakhamela ijusi kwifomu, engeza elikhuhluziwe. Khona-ke impuphu - 320 g, i disintegrant isigamu-spoon. Khetha imodi "Amakhekhe" noma "baking", "Ibhotela amakhekhe" - kuye ngokuthi imodeli imoto. Ekupheleni inqubo ukususa, epholile, uthathe yizicucu. It kungenziwa embozwe frosting noma uqweqwe lukashukela.
Uyazi yini ukuthi ukupheka amadombolo?
Cats izinhlobo ezingavamile: igama nencazelo. I izinhlobo eziyivelakancane zamakati emhlabeni